10 Ecommerce Trends Will Ga-ahụ Emejuputara na 2017 | Martech Zone
Ọ bụghị n’oge gara aga na ndị na-eri ihe anaghị enwe ntụsara ahụ na ha itinye data kaadị kredit ha na ntanetị iji zụta. Ha atụkwasịghị saịtị ahụ obi, ha atụkwasịghị ụlọ ahịa ahụ obi, ha atụkwasịghịkwa mbupu obi… ha atụkwasịghị ihe ọ bụla obi. Otú ọ dị, ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, na nkezi ndị na-azụ ahịa na-eme ihe karịrị ọkara nke ihe ha zụrụ n'ịntanetị!
Ejikọtara ya na ọrụ ịzụ, nhọrọ dị egwu nke nyiwe ecommerce, enweghị ebe nkesa nkesa, yana okwute dị n'okike maka ịbata ahịa na-arị elu na ma ọkaibe ma uto. N’iburu nke ahụ n’uche, ọ dị mkpa ilelị otu ị ga-esi gosi ụlọ ahịa gị iche na ntanetị.
SSL2Buy, onye na-eweta SSL zuru ụwa ọnụ, ewepụtala usoro iri eCommerce iji lelee anya na 2017 gbakọrọ n'ime ọmarịcha ihe ọmụma a:
Ọgwụgwụ nke Black Friday na Cyber ​​Monday - ebe ọ bụ na ịchọghị ịhapụ ihe ndina gị ma lụọ ọgụ na ahịrị, ecommerce na-ebelata mmetụta nke ụbọchị ahịa ndị a na omume ịzụta na-agbasa na ọnwa niile nke Cyber ​​Nọvemba.
Imirikiti Ahụmịhe alizedzụ ahịa na nke Dynamic - nyiwe nke soro zụta mkpebi na akparamagwa bụ emesia ziri ezi ma nwee ike inyere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị aka ịnye akparamagwa agwa nke na-ebelata ịzụ esemokwu ma na-enye ndụmọdụ ngwaahịa nke ndị ahịa chọrọ n'ezie.
Ndị ahịa ga-ejikọ na ọgụgụ isi - ppingzụ ahịa, ntinye akwụkwọ na ndị ahịa ahịa na-akparịta ụka ga-abụ n'ụzọ ziri ezi ma rụọ ọrụ nke ọma na-aza ajụjụ ịzụ ahịa n'ịntanetị, na-emezi ahụmịhe ecommerce, na-eme ndị ọrụ, ma na-akwọ ha iji mee ka ọnụ ahịa ụgbọ ahịa na-abawanye ma na-ebelata ịgbahapụ.
Na-ebu amụma ziri ezi maka Nextzụta Onye Ahịa - Ikike ịnakọta ma nyochaa nnukwu data na-enye amụma dị oke mma na usoro amụma ndị a na-eji etinye onyinye n'ihu onye na-azụ ha n'oge ha chọrọ ya.
Mee ka mkpanaka mkpanaka ahụ dị ka o kwere mee - Ekwentị karịrị desktọọpụ maka ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị na-enyocha ma na-eme mkpebi mkpebi ngwaahịa ha ọzọ. Google na enye ndeputa puru iche nke ekwenti nke choro ulo oru ka ha buru uzo nke kachasi nma iji choputa saiti ha.
Asingbawanye nnyefe otu ụbọchị - 29% nke ndị na-azụ ahịa ekwuola na ha ga-akwụ ụgwọ maka nnyefe otu ụbọchị Ọ bụ ihe ijuanya na ihe kpatara ndị isi dịka Amazon ji weta ọrụ ahụ n'ahịa, na-agbakwụnye mkpa maka ịga leta ụlọ ahịa kacha nso.
Na-ere mmadụ - 70% nke ndị na-azụ ahịa na-emetụta akara na ngwaahịa na-atụ aro na soshal midia Inye aka na mgbasa ozi mgbasa ozi maka ịbawanyewanye mmata na ịkwado ugbu a na-agba ahịa, na-agba ndị ahịa ume ịzụlite ọkaibe usoro mgbasa ozi ọhaneze.
HTTPS achọrọ na Afọ 2017 - Na-enweghị njikọ SSL, ndị ahịa na ndị na-eweta ecommerce na-adaba adaba karịa inweta data ezuru ma ọ bụ usoro hacked. Google ekwenyelarị SSL etinyela n'ime algorithms dị elu, ọ bụ oge iji chebe saịtị ọ bụla ị nwere ebe a na-anakọta ma ọ bụ gafere data.
Na-ere omni-ọwa - Ndị na - azụ ahịa Multichannel na - emefu ihe karịrị ugboro atọ karịa ndị na - azụ ahịa otu ụzọ chọrọ ndị na - azụ ahịa ịzụlite mkpọsa dị mgbagwoju anya nke na - eso ndị na - azụ ahịa ma duru ha gaa zụta ma ha nọ n’ụlọ ahịa, ekwentị mkpanaaka, ma ọ bụ ebe ọ bụla.
Ntughari ngwaahịa - Ná nkezi, ọ chọrọ akara aka asaa tupu ị nwee ike iduga onye zụrụ azụ Ntugharị ugbu a bụ atụmatụ dị mkpa maka ahịa ecommerce ọ bụla.
Jide n'aka na ị tụlee usoro ndị a dị mkpa mgbe ị na-eke gị ecommerce ahịa atụmatụ maka 2017.
Tags: Amamịghe echichennukwu datanwa ogecyber mondaynnyefeịzụ ahịa ikeozi ecommerceusoro ecommercehttpsinfographicịzụ ahịa ekwentịecommerce omnichannelomnichannel na-erena-emegharị ahụnnyefe otu ụbọchị ahụscommercena-ere na-elekọta mmadụmbupushoppingịzụ ahịa ahụmahụazụmahịa azụmahịaecommerce mmadụna-elekọta mmadụ na-ereSSL